Warka subax waxaa ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 20 02 2017.	Read More »
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waxa uu kamid yahay barnaamijyada habeen waliba ka baxa Idaacadda Alfurqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysiyo lagu falanqeynayo xaaladda dalka. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 19 02 2017	Read More »
Maxamad Yarow oo Isku Dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. (Sawir)
Maxamad Yarow Ibraahiim oo ka tirsanaa maamulka Shariif Xassan ayaa isku dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo sheegay inuu Allaah uga towbad keenay kamid ahaanshihiisii maamulkaasi. Wuxuu sheegay inuu muddo ku sugnaa magaalada Baydhabo islamarkaana uu kusoo arkay ciidamo Itoobiyaan ah oo dadka muslimiinta ah ku amar taagleynaya, taasna ay kamid tahay wax yaabaha uu u dul-qaadan waayay. Sidoo kale waxa ...	Read More »
Warka Duhurnimo waxa uu kamid yahay sadaxda war ee ka baxa idaacada alfurqaan kala deg qeybta hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 19 02 2017	Read More »
Warka subaxnimo waxaa saaka ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 19 02 2017.	Read More »
Beeralayda degmada salagle oo horumar ku tilaabsaday(Codad+Sawiro)
Bulshada ku dhaqan magalada salagle ee gobalka jubada hoose ayaa sanadkii u dambeeyay muujiyay dadaal balaaran oo la xariira dhanka wax soo saarka. Beero hor leh ayaa la falay iyadoo kuwa horay u shaqeynayayna howshooda lagu sii dadaalay waxaan la arkayaa rag iyo dumar ku howlan wax tacbashada. Galeyda ayaa xiligaan aad loo beerayaa waxaana dadka shaqadaan wada ka mid ...	Read More »
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waxa uu kamid yahay barnaamijyada habeen waliba ka baxa Idaacadda Alfurqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysiyo lagu falanqeynayo xaaladda dalka. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 18 02 2017	Read More »
Page 20 of 210« First...10«1819202122	»	304050...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan